Hebei Kexing pharmaceutical Co., Ltd., natsangana tamin'ny taona 1996, dia orinasa tsy miankina teknolojia avo lenta mampiditra ny R&D, fanamboarana ary marketing ireo vokatra mahasalama biby. Ny orinasanay dia nahazo fiankinan-doha sy fanohanana avy amin'ny mpanjifa marobe tamin'ny alàlan'ny fanombohana avo lenta, fitantanana matotra sy siantifika, kalitaon'ny vokatra tsara ary serivisy fivarotana marika vaovao.
Ny orinasanay dia manana zavamaniry fanodinana kilasy voalohany iraisam-pirenena. Manambola RMB60 tapitrisa izahay amin'ny fananganana ilay fotodrafitrasa lehibe GMP misy rihana efatra, miaraka amin'ny velarantany 7455 metatra toradroa. Ny zavamaniry anay dia iray amin'ireo zavamaniry fanomanana zava-mahadomelina lehibe indrindra ao Shina. Anisan'izany, misy tsipika famokarana enina ho an'ny tsindrona rano, fampidirana be, ranoka am-bava, vovoka, takelaka ary famonoana otrikaretina; tsipika telo ho an'ny vovoka.
Vokatra isan-taona toy izao: mahatratra 15 tapitrisa taonina ny tsindrona; ny infusion lehibe dia mahatratra tavoahangy 150.000, mahatratra 150 tapitrisa ny takelaka, mahatratra 600 taonina ny vovo-dronono ary mahatratra 1200 taonina ny vokatra am-bifotsy.
Ny sanda famokarana tanteraka dia mahatratra 125 tapitrisa mahery. Ny lalam-pamokarana valo mavitrika dia nandalo ny fanamarinana GMP an'ny Ministeran'ny Fambolena Nasionaly indray mandeha nanomboka ny volana septambra 2004. Ny dingana dingana 2, ao anatin'izany ny tsipika fitrandrahana TCM iray ary ny tsipika famokarana vovoka iray, ireo trano birao feno ary trano biby hanaovana andrana dia hampiroborobo ny R&D ary manamboatra ny fahaizan'ny orinasanay mandroso, ary mametraka fototra mafy orina amin'ny fampiroboroboana ny varotra fanondranana.
Kexing dia hitazona famokarana azo antoka ary hizara rahampitso mahafinaritra amin'ny mpanjifa rehetra!
Karazan'orinasa: Mpanamboatra, Orinasa mpivarotra
Product Range: Fitaovana fandidiana orthopedika, fitsaboana ara-biby
Vokatra / serivisy: Tsindrona veterinera, vahaolana amin'ny biby, vovoka veterinera, takelaka fiompiana, famonoana biby
Mpiasa tanteraka: 201 ~ 500
Renivohitra (US $ tapitrisa): 50.000.000RMB
Taona napetraka: 1996
Adiresin'ny orinasa: NO.114 Làlana Changsheng, Faritra fampandrosoana Luquan, Shijiazhuang, Hebei, Sina
Fotoana fitarihana antonony: Fotoana fitarihan'ny vanim-potoana tendrony: 0, Fotoana tsy itarihan'ny vanim-potoana: 0
Volan'ny varotra isan-taona (US $ an-tapitrisany): US $ 50 tapitrisa - US $ 100 Tapitrisa
Volan'ny fividianana isan-taona (US $ an-tapitrisany): US $ 10 tapitrisa - US $ 50 tapitrisa
Manondrana isan-jato: 31% - 40%
Markets lehibe: Afrika, Amerika, Azia, Eoropa Atsinanana, Moyen Orient, Oceania, Markets hafa, Eropa Andrefana, Manerantany
Laharana famokarana: 14
No. ny mpiasa ao amin'ny QC: 41 -50 Vahoaka
OEM Services Provided: ENY
Factory Size (Sq.meters): 30 000-50,000 metatra toradroa
Toerana misy ny orinasa: 114 Làlana Changsheng, Zone de Luquan Development, Shijiazhuang City, Hebei